Fiaviana sy tantara-QIANGSHENG MAGNETS CO., LTD
Ny andriamby maharitra dia ampahany lehibe amin'ny fiainana maoderina. Izy ireo dia hita ao na ampiasaina hamokarana saika ny rehetra maoderina ankehitriny. Ny andriamby maharitra voalohany dia novokarina avy amin'ny vato voajanahary antsoina hoe lodestones. Ireo vato ireo dia nianatra voalohany ny 2500 taona lasa izay ny Sinoa ary avy eo ny Grika, izay nahazo ny vato avy any amin'ny faritanin'i Magnetes, izay niavian'ilay fitaovana. Hatramin'izay, ny fananan'ny akora andriamby dia nihatsara fatratra ary ny fitaovana manerantany maharitra maharitra an-jatony mahery mahery noho ny andriamby fahagola. Ny teny hoe andriamby maharitra dia avy amin'ny fahafahan'ny andriamby mitazona fiampangana andriamby aorinan'ny nanesorana azy tamin'ny fitaovana manetsika. Ireo fitaovana toy izany dia mety ho andriamby maharitra manerantany, andriamby elektrika na coil an'ny tariby izay voampanga kely amin'ny herinaratra. Ny fahaizan'izy ireo mitazona andriamby andriamby dia mahatonga azy ireo ho ilaina amin'ny fitazonana zavatra amin'ny toerany, hanovana ny herinaratra ho hery manosika ary ny mifamadika amin'izany (motera sy motera mpamokatra herinaratra), na misy fiantraikany amin'ny zavatra hafa nentina teo akaikin'izy ireo.
«Miverina ho ambony
Ny fanatanterahana ny magnetic mahery indrindra dia fiasa amin'ny injenieran'ny magnetika. Ho an'ny mpanjifa izay mila fanampiana na famolavolana fizaran-tany QM ny ekipa injeniera fampiharana za-draharaha sy injeniera mpivarotra fahalalana no miasa. QM Miara-miasa amin'ny mpanjifa ny injeniera mba hanatsarana na hanamarina ireo endrika efa misy ary koa ny mamolavola endrika novolavola izay mamokatra fiantraikany manokana. QM namolavola famolavolana vita sokitra namboarina izay manome zahana magnetika mahery vaika, fanamiana na miavaka manokana izay matetika misolo ny lozomoka elektronika mavesatra sy tsy mahomby ary famolavolana gazy maharitra. Matoky ny mpanjifa rehefa mitondra foto-kevitra sarotra na hevitra vaovao io QM hiatrika izany fanamby izany amin'ny alàlan'ny fakana sary avy amin'ny 10 taona nahitana ny fahaizan'ny magnetika efa voaporofo. QM dia manana ny olona, ​​ny vokatra ary ny haitao izay mametraka ny magneto.
Safidy Magnet ho an'ny rindranasa rehetra dia tsy maintsy mandinika ny tontolon'ny magnetika manontolo sy ny tontolo iainana. Raha mety ny Alnico dia azo ahena ny habe misy ny magneto raha toa ka afaka manao magnetizing aorian'ny fivoriambe ao amin'ny circuit magnetika. Raha tsy miankina amin'ny singa hafa amin'ny circuit, toy ny fampiharana amin'ny fiarovana, ny halavam-potoana mahomby amin'ny halavam-paratra (mifandraika amin'ny kojakoja permeance) dia tsy maintsy ho tsara tokoa mba hampiasa ny magnetika mihoatra ny lohalika amin'ny curve demagnetization quadrant. Ho an'ny fampiharana manakiana, ny haingo Alnico dia mety hivezivezy amin'ny sanda fitadiavam-bidy fitakiana fahitana.
Vokatry ny fanerena ambany dia ny fahatsapana ny vokatra demagnetizing noho ny sahan'andriamby ivelany, ny fahatairana ary ny mari-pana fampiharana. Ho an'ny fampiharana mitsikera, ny magnets Alnico dia azo haorina amin'ny mari-pana mba hampihenana ireo vokatra ireo. Misy kilasy efatra an'ny andriamby maoderina vita varotra maoderina, izay miorina amin'ny endrik'izy ireo. Ao anatin'ny kilasy tsirairay dia misy fianakaviana manana naoty manana ny toetrany andriamby. Ireto kilasy ankapobeny ireto dia:
NdFeB sy SmCo dia fantatra miaraka amin'ny andriamby Rare Earth satria izy roa ireo dia mifangaro amin'ny akora avy amin'ny vondrona singa Rare Earth. Neodymium Iron Boron (firaketana ankapobeny Nd2Fe14B, matetika nohafohezina hoe NdFeB) no fanampin-javatra ara-barotra farany indrindra amin'ny fianakavian'ireo akora maoderina maoderina. Amin'ny maripanan'ny efitrano, ny andriamby NdFeB dia mampiseho ny fananana avo indrindra amin'ny akora magnet rehetra. Samarium Cobalt dia amboarina amina sanganasa roa: Sm1Co5 sy Sm2Co17 - izay antsoina matetika hoe karazana SmCo 1: 5 na SmCo 2:17. Ny karazany 2:17, miaraka amin'ny sanda ambony Hci, dia manome fitoniana lehibe kokoa noho ireo karazana 1: 5. Ny keramika, fantatra ihany koa amin'ny hoe Ferrite, andriamby (firafitra ankapobeny BaFe2O3 na SrFe2O3) dia natao varotra nanomboka tamin'ny taona 1950 ary manohy ampiasaina be ankehitriny noho ny vidiny ambany. Ny endrika manokana misy ny andriamby Ceramic dia fitaovana "Flexible", vita amin'ny fatorana vovoka seramika ao anaty binder malefaka. Alnico magnet (fananganana ankapobeny Al-Ni-Co) dia natao varotra tamin'ny taona 1930 ary mbola be mpampiasa ankehitriny.
Ireo fitaovana ireo dia miteraka karazan-java-misy isan-karazany ilaina amin'ny fangatahana fampiharana. Ity manaraka ity dia natao hanomezana fomba fijery midadasika sy azo ampiharina momba ireo lafin-javatra izay tsy maintsy hojerena amin'ny fisafidianana fitaovana, grika, endriny ary haben'ny magnetika. Ny tabilao eto ambany dia mampiseho ny soatoavina mahazatra momba ireo toetra manan-danja amin'ny marika voafantina amin'ny fitaovana isan-karazany ho fampitaha. Ireo soatoavina ireo dia horesahina amin'ny antsipiriany ireto fizarana manaraka ireto.
Fampitahana vita amin'ny Magnet
* T max (hafanana fiasa azo atao indrindra) dia natao ho an'ny fanondroana fotsiny. Ny mari-pana azo ampiharina farany indrindra azo atao amin'ny magneto dia miankina amin'ny faribolana izay miasa ao.
Mety mila miforona ny Magnets raha miankina amin'ny fampiharana izay tiana nokasaina. Manatsara ny fahitana ny haingam-bolo, ny fiatrehana ny vatohay, ny fiarovana amin'ny akanjo ary mety ny fangatahana amin'ny ririnina.
Samarium Cobalt, fitaovana Alnico dia miaro amin'ny vatoharan-tany ary tsy mila mitambatra manohitra ny korosi. Alnico dia mora vita amin'ny hatsarana tarehy.
Ny magneto NdFeB dia mora voan'ny fahasimbana ary matetika voaro amin'izany fomba izany. Misy karazana palitao mifanentana amin'ny haingam-pandeha maharitra, Tsy ny karazana palitao rehetra dia mety ho an'ny fitaovana rehetra na ny géometrika magneto, ary ny safidy farany dia miankina amin'ny fampiharana sy ny tontolo iainana. Safidy fanampiny dia ny fametrahana ny magneto ao anaty lavaka ivelany mba hisorohana ny fahalotoana sy ny fahasimbana.
Tsara amin'ny fanetrentena
Tsara amin'ny paompy sira
Lehibe amin'ny fanoherana ny sira
Superior Manohitra ny hamandoana
Mainty, mena, Grey
Tsara loatra amin'ny fanetrentena
Tsara amin'ny fanetren-tena, famafazana sira. Matihanina miady amin'ny solika, gazy, holatra ary bakteria.
Ny haingon-tolo maharitra maharitra nomen'ny roa, Magnetized na tsy misy magnet, dia matetika tsy voamarika ny fahaizany. Raha mitaky ny mpampiasa dia azontsika atao ny manamarika ny fahitana amin'ny fomba nifanarahana. Rehefa mihetsika ny filaharana dia tokony hampahafantatra ny fepetra momba ny famatsiana ny mpampiasa ary raha ilaina ny mariky ny fahitsiana.
Ny sehatry ny magnetization ny magneto maharitra dia mifandraika amin'ny karazana akora magnetika sy ny hery famoretana anatiny. Raha mila ny magnetization sy demagnetization ny magneto, azafady mba mifandray aminay ary mangataka fanohanana teknika.
Misy fomba roa hanamboarana ny magneto: ny saha DC ary ny magnetic tanety.
Misy fomba telo hanimboana ilay magneto: ny fanaingoana ny hafanana dia fomba iray manokana. fanakorontanana amin'ny sehatry AC. Fanalefahana ny sehatra DC. Izany dia mangataka ny angovo mahery vaika sy ny fahaiza-manaingoana avo lenta.
Ny endrika geometrika sy ny fitaterana ny magnetic maharitra: raha ny marina, mamokatra magnetika maharitra isika amin'ny endrika isan-karazany. Matetika dia ahitana sakana, kapila, peratra, fizarana sns ... Ny sary amin'ny antsipirihany ny zotra magnetization dia eto ambany:
Toro-lalana ho an'ny Magnetization
(Diagrams manondro fomba fanoroana mahazatra amin'ny fanodinana)
nitaingotra ny onja
oriented oriented amin'ny fizarana
niverimberina taty aoriana tamin'ny multipole iray
multipole oriented amin'ny fizarana amina sakany ivelany *
multipole oriented amin'ny segmen amin'ny endrika iray
oriented radianina *
voalamina amin'ny savaivony *
multipole oriented amin'ny faritra amin'ny sakany anatiny *
rehetra azo alaina ho fitaovana isotropic na anisotropic
* tsy misy afa-tsy amin'ny fitaovana isotropika sy anisotropika sasany
Afa-tsy ny refy amin'ny lalan'ny magnetization, ny haben'ny haavon'ny magnetika maharitra dia tsy mihoatra ny 50mm, izay voafetra amin'ny sehatry ny orientation sy fitaovana fanotana. Mahatakatra hatramin'ny 100mm ny refy ao amin'ny lalana unmagnetization.
Ny fandeferana matetika amin'ny +/- 0.05 - +/- 0.10mm.
Fanamarihana: ny endrika hafa dia azo amboarina araka ny santionan'ny mpanjifa na ny pirinty manga
1. Ireo andriamby simika maharitra miaraka amin'ny zaridra mahery vaika dia manintona be ny vy sy ny zavatra hafa rehetra. Amin'ny lafiny mahazatra, ny mpikirakira boky dia tokony hitandrina tsara mba tsy hitera-doza. Noho ny hery mahery vaika, ny masira lehibe akaiky azy ireo dia mandray ny loza hateraky ny fahasimbana. Ny olona dia amboariny foana ireo magneto ireo na amin'ny clamp. Amin'ity tranga ity dia tokony hofaintsika ny fonon-tanana fiarovana amin'ny fandidiana.
2. Amin'izao toe-javatra misy ny sehatry ny magnetika mafy izao, ny singa elektronika sy ny metatra fitsapana dia azo ovaina na simba. Azafady mba jereo azy fa ny solosaina, fampisehoana ary haino aman-jery magnetika, ohatra ny disc magnetika, kasety cassette magnetika ary horonantsary firaketana horonantsary sns ... dia lavitra ny singa manamboatra, hoy ny teboka lavitra noho 2m.
3. Ny fifandonan'ny hery manintona eo amin'ireo andrana roa maharitra dia hitondra valan-javaboary lehibe. Noho izany dia tsy tokony apetraka manodidina azy ny raharaha mirehitra na mamoaka rano.
4. Rehefa asiana hidrogen ny magneto dia voarara ny mampiasa magnet manosotra tsy misy arika. Ny antony dia ny fahavoazan'ny sôktrôma dia hamotika ny mikroketrika ny hidro ary hitarika ny fanodinkodinam-pananana hidirana. Ny fomba tokana hiarovan-tena amin'ny fomba mahomby dia ny fametahana ny magneto amin'ny tranga iray ary asio tombo-kase izy io.